Semalt को साथ मेरो गुगल व्यवसाय प्रोफाइल सिर्जना गर्दै
गग्गल सबै खोजी ईन्जिनहरूको आमा हुनुभएको छ, ईकमर्सको फलिफाप गर्न नयाँ तरिकाहरू जारी गर्दछ। त्यस्ता एक सहज विचारहरू गुगल व्यवसाय प्रोफाइल सिर्जना गर्दैछ। गुगल मेरो व्यवसाय एक नि: शुल्क र प्रयोग गर्न सजिलो उपकरण हो गुगलमा आफ्नो अनलाइन उपस्थिति प्रबन्ध गर्न व्यवसायहरू र संगठनहरूलाई मद्दत गर्न। यसको मतलव त्यस्ता व्यवसायहरूले गुगल खोजी ईन्जिन मात्र होइन गुगल नक्सामा पनि पप अप गर्दछ। सबै आवश्यक छ व्यवसायहरूको लागि एक व्यवसाय प्रोफाइल खाता सिर्जना गर्न, प्रमाणित गर्न र तपाईंको व्यावसाय जानकारी सम्पादन गर्नका लागि।
यी उपकरणहरूले छिटो मान्यता प्राप्त गर्‍यो किनकि यसले केवल व्यवसायलाई मात्र ग्राहकहरूलाई फाइदा गर्दैन। गुगल खोजी ईन्जिन प्रयोगकर्ताहरू जसले कुनै खास सेवा खोज्दै छन् अब ब्यापारहरू भेट्टाउन सक्दछन् र उनीहरूको कथाहरू साथै वेबसाइटहरू भ्रमण नगरीक पढ्न सक्दछन्। व्यवसाय लि then्क खोल्न अगाडि बढ्ने आगन्तुकहरू पहिले नै निश्चित छन् तिनीहरू भाँडामा लिन चाहन्छन्, क्लिकहरू र नेतृत्वहरूको बीचमा अनुपातको अन्तरलाई कम गरेर जसले व्यवसायको संरक्षण गर्दछ।
किन तपाईंलाई मेरो व्यापार गुगल खाता चाहिन्छ
यदि तपाईंलाई गुगल व्यवसाय खाता हुनुपर्दछ भन्ने शंका छ भने, यहाँ केहि चित्तबुझ्दो कारणहरू छन्।
१. यसले तपाईंलाई "डिसभरेबल" बनाउँछ।
अनलाइन खोजीहरू डिजिटल हो, तपाईंको स्टोरको उमेरलाई बेवास्ता गर्दै, उपभोक्ताहरू अनलाइन प्राप्त गर्न, तपाईं डिजिटल पाउनको लागि सक्षम हुनु आवश्यक छ। यी ग्राहकहरु तपाइँको सेवा वा उत्पादनहरु को आवश्यक छ कि छैन निर्धारण गर्न आफ्नो स्टोर को डिजिटल प्रतिनिधित्व मा निर्भर गर्दछ। त्यसपछि उनीहरूले तपाइँको संरक्षण गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्दछन्। तपाई गुगल भण्डार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको स्टोरमा भौतिक खुट्टा राख्न र तपाईको ईकामर्स प्लेटफर्ममा बढी यातायात।
मेरो व्यवसाय खाता प्रयोगकर्ताहरूले यी सबै रमाईलो गर्दछ किनकि यी खाताहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि जब तपाईंको कम्पनीको नाम खोजी क्वेरीको रूपमा इनपुट हुन्छ, यसले तपाईंको कम्पनीलाई गुगल SERP र गुगल नक्शामा प्रदर्शन गर्दछ। एकचोटी यो काम सकिए पछि, तिनीहरूलाई तपाईंको पसल, स्टोर, मल्ल, इत्यादिका लागि निर्देशनहरू दिइनेछ।
स्थानीय एसईओ कार्यान्वयन गर्दा मेरो व्यापार पनि आवश्यक उपकरण हो। यसको साथ, तपाई पृष्ठ एकमा देखा पर्नुहुन्छ, दोस्रो वा गुगल खोजको बाँकी अन्डभ गरिएको पृष्ठहरू होईन।
जोसँग अवस्थित अनलाइन उपस्थिति छन्, Google मेरो व्यवसायले अझ पनी तपाईलाई राम्रो नतीजा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्दछ। साथै, गुगल मेरो व्यवसाय एनालिटिक्सको पहुँचको साथ आउँदछ जुन तपाईंलाई तपाईंको सशुल्क र जैविक विज्ञापन रणनीतिहरूलाई फाइन-ट्यून गर्न अनुमति दिन्छ।
२. यसले तपाईका ग्राहकहरुलाई सूचित राख्छ।
एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा जुन हामीले धेरै नराम्रो रैंकिंग वेबसाइटहरूसँग फेला पारेका छौं त्यो हो कि उनीहरूले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको व्यवसायको बारेमा महत्त्वपूर्ण विवरणहरू अनुमान गरी छोड्छन्। वा अन्य समय, ग्राहकहरु Yelp, TripAdvizer, र अधिक आफ्नो कम्पनीहरु को बारे मा जान्न को रूप मा समीक्षा साइटहरु मा जानु पर्छ। एक, एक तर्फी यात्रा मा जानकारी प्राप्त गर्न को लागी दुई पटक लिन को लागी राम्रो छ? यसले किन गुगललाई मेरो व्यवसाय खाता राख्नु उत्कृष्ट विचार हो भनेर बुझाउँदछ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि जब तपाईंको व्यवसायको नाम खोजी गरिन्छ, तिनीहरूले तपाईंको कम्पनीको कलमबाट प्रत्यक्ष र वैध जानकारी फेला पार्दछन्।
तपाइँ मेरो व्यापार जानकारी मा समावेश छ:
र अन्य धेरै आवश्यक विवरणहरू।
तपाईं पोष्ट गर्न, साझेदारी गर्न, र माथि सूचीबद्ध विवरण अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। नियमित रूपमा यस्तो डाटा अद्यावधिक गरेर, ग्राहकहरूले कहिले पनि असुविधा वा निराशा अनुभव गर्दैनन्।
गलत सूचना इन्टरनेटबाट बच्नको एक धेरै खतरनाक उपाध्यक्ष हो। यदि तपाईंले बाँच्ने आशा गर्नुहुन्छ भने तपाईंले तिनीहरूलाई मौन राख्नु पर्छ। गलत जानकारीले खराब ग्राहक अनुभव र ग्राहकहरूको नोक्सान निम्त्याउन सक्छ। तपाईंको स्टोर इन्टरनेटमा "बन्द हुँदै" को गलत समाचारको कारण एक ग्राहक हराएको कल्पना गर्नुहोस्।
गुगल मेरो व्यवसाय खाताले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकहरूलाई सूचित राख्न अनुमति दिन्छ।
Consumer. उपभोक्ता विश्वास बढावा
गुगल मेरो व्यापार खाता हुनुले तपाईंलाई गुगलबाट विश्वसनीयता दिन्छ। यो तपाइँका उपभोक्ताहरूलाई सूचित गर्ने तरिका हो जुन गुगलले तपाईंको व्यवसायलाई अनुमोदन गर्दछ। ग्राहकहरू Business०% बढी मेरो व्यापार लिस्टिंगको साथ व्यवसायको संरक्षण गर्ने सम्भावना हुन्छ।
अर्को अध्ययनमा, हामीले पत्ता लगायौं कि गुगलमा पूर्ण लिस्टिंगको साथ व्यवसायहरू दुई पटक ग्राहकहरूको विश्वास कमाउने गर्दछन्। हामी तपाईंलाई इन्टरनेटमा बाँच्नको लागि आवश्यक उपकरणहरू मध्ये एकको रूपमा विश्वासको बारेमा बताउन चाहन्छौं। तपाईंको वेबसाइटमा विश्वासको प्रभावको बारे अधिक जान्नुहोस् यहाँ
तपाईंको व्यवसायको संरक्षण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा ट्रस्ट एक प्रमुख कारक हो। एक ग्राहकको तपाईको व्यापारमा त्यति भरोसा हुन्छ, उनीहरूले तपाईको व्यवसायको ठेगाना लिन्छ र तपाईलाई भेट्न थाल्दछ। मेरो व्यापार खाताको साथ, तपाई गुगलले विश्वासयोग्य ठानिनुहुन्छ, जुन स्वाड गर्न पर्याप्त भन्दा बढी छ, र तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि store 38% सम्म तपाईको भण्डारमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ र २ more% बढी तपाईको ब्यापारको संरक्षण गर्न मनपर्दछ।
तपाई अझै पनी शting्का गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईसँग मेरो गुगल खाता किन गुगल हुनु पर्छ? थिंक विथ गुगलद्वारा गरिएको एक अध्ययन,% 88% उपभोक्ताहरू अनलाइन समीक्षामा भरोसा गर्दछन् जति उनीहरूले व्यक्तिगत सिफारिशहरूमा विश्वास गर्दछन्।
म कसरी Google मेरो व्यापार खाता सेट अप गर्न सक्छु?
अब जब तपाईले बुझ्नु भएको छ कि गुगलको मेरो ब्यापार खाता हुनु कत्ति फाइदाजनक छ, यो समय हो तपाईंले आफ्नो व्यवसायको लागि कसरी सेट अप गर्ने भनेर सिक्नुभयो। Semalt सबै चरणहरूमा तपाईलाई मार्गनिर्देशन गर्न यहाँ छ, यो सुनिश्चित गरेर तपाई सही तरीकाले पाउनुहुन्छ। यद्यपि तपाईं Semalt सबै आवश्यक जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र हाम्रो खाता तपाईंको व्यवसायको तर्फबाट सिर्जना गरिएको हुनेछ।
चरण 1: गुगल मेरो व्यवसाय मा साइन इन गर्नुहोस्। स्पष्ट सही? ठीक छ, तपाईंले लिनु भएको पहिलो चरण भिजिटिंग हो www.google.com/business साईन ईन गर्नका लागि। तपाईले आफ्नो प्रिईजिस्टिंग व्यापार ईमेल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा साइन इन गर्न नयाँ ईमेल सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
चरण २: तपाइँको व्यवसाय परिचय तपाईंको व्यवसायको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र यदि यो ड्रप-डाउन मेनूमा देखा पर्दैन भने क्लिक गर्नुहोस् गुगलमा ब्यापार जोड्नुहोस् त्यसो भए तपाईको व्यवसायका लागि उपयुक्त वर्ग।
चरण:: तपाईंको व्यवसाय स्थान प्रविष्ट गर्नुहोस्। हामीले अघि नै उल्लेख गरेझैं गुगल मेरो व्यवसाय महत्त्वपूर्ण मार्केटिंग उपकरण हो किनकि यसले तपाईंलाई अनलाईन ट्राफिक मात्र ल्याउँदैन। अझै, यसले तपाईंको शारीरिक व्यवसाय स्थानमा यातायात कोर्दछ। जे होस्, तिनीहरूलाई जान्नु आवश्यक छ कि उनीहरू जानु भन्दा अघि कहाँ जान्छन्, त्यसैले तपाईं आफ्नो व्यवसायको हालको स्थान इनपुट र अपडेट गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं सँग एक भौतिक व्यापार स्थान छ, चयन गर्नुहोस् हो। एक स्थान जोड्दै, तपाईले गुगल पपमा पिन राख्नुहुन्छ जुन सही स्थान इनपुट देखाउँदछ।
चरण:: तपाईंको सम्पर्क जानकारी भर्नुहोस्। तपाईंले ग्राहकलाई तपाईंको व्यवसायमा पुग्नको लागि साधन प्रदान गर्न तपाईंको व्यवसाय फोन नम्बर र वेबसाइट ठेगाना इनपुट गर्नुपर्नेछ। यदि तपाइँ एक वेबसाईटको सट्टा फेसबुक प्रोफाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाइँ साटोमा थप्न सक्नुहुन्छ।
चरण। : समाप्त गर्नुहोस् र तपाईंको सूची प्रबन्ध गर्नुहोस्। तपाईं क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हो यदि तपाईं नियमित अपडेट र सूचनाहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने। त्यसो भए तपाइँ फिनिस क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाइँलाई तपाइँको व्यवसाय प्रमाणित गर्न सोधिनेछ।
गुगलमा कसरी तपाईंको व्यवसाय प्रमाणित गर्ने
चरण 1: Google भर्खरको खातामा लग ईन गर्नुहोस् तपाईले भर्खरको भ्रमण गरेर सिर्जना गर्नुभएको हो www.google.com/business।
चरण २: अब प्रमाणित क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग धेरै गुगल मेरो व्यापार खाताहरू छन् भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहीमा लग इन हुनुभएको छ।
चरण:: तपाईं यसलाई कसरी प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ छान्नुहोस्। यदि तपाईं यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, मेल द्वारा पोष्टकार्ड पूर्वनिर्धारित प्रमाणिकरण विकल्पको रूपमा चयन गरिएको छ, तर तपाईं अन्य विकल्पहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंको व्यवसाय योग्य छ भने, तपाईं अन्य विकल्पहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जस्तै फोन वा ईमेल र तपाईंले चाहानु भएको विकल्प छनौट गर्नुहोस्। तपाईंको स्क्रीनमा फारममा निर्दिष्ट गरिएको विवरणहरू भर्नुहोस् र सबै चीज ठीक तरीकाले गरिएको छ भनि सुनिश्चित गर्न डबल-चेक गर्नुहोस्। एक पटक तपाईलाई उपलब्ध गराईएको जानकारी बारे निश्चित हुनुहुन्छ, तपाई सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ।
एकचोटि तपाईंले यो फारम बुझाउनुभयो भने, यो पोस्टकार्ड आउन केहि दिन देखि दुई हप्ता लिन सक्दछ। जब तपाइँ तपाइँको पोष्टकार्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ, साइन इन गर्नुहोस् र मेनूबाट प्रमाणित स्थान क्लिक गर्नुहोस्। पाँच अंकको प्रमाणिकरण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईले पोस्टकार्डमा पाउनुभयो।
तपाईको प्रमाणिकरण पछि, तपाईले नोट गर्नु पर्छ कि केहि हप्ताहरू तपाईको ब्यापारिक सूचि google मा देखा पर्न अघि पास हुन सक्छ। जब तपाईं पर्खनुहुन्छ, तपाईंले गुगल मेरो व्यवसाय अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्नेछ तपाईंको खातालाई उत्तम प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्न।
कसरी तपाईंको गुगल मेरो व्यापार प्रोफाइल अप्टिमाइज गर्ने
तपाईंको सम्पूर्ण प्रोफाइल भर्नुहोस्: गुगललाई तपाईंको व्यवसायको बारे अनुमति दिइएको जति जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। यो किनभने गूगल को लागी तपाईको व्यवसाय लाई सान्दर्भिक खोज क्वेरीहरु संग जोडी गर्न को लागी यो छ। अर्को शब्दहरूमा, यसले तपाईंको एसईओ रणनीति सुधार गर्दछ। गुगलले यसलाई यो बर्णन गर्दै भन्छ, "गुगलले सब भन्दा बढि पूर्ण गुगललाई मेरो व्यवसायको उदारणको समर्थन गर्दछ जब उनीहरूलाई प्रत्येक खोजीको लागि स्तर निर्धारण गर्दछ। सहि र पूर्ण जानकारीको साथ खाताहरू सही खोज क्वेरीहरूसँग मिलाउन सजिलो हुन्छ।"
तस्विरको साथ स्ट्यान्डआउट: व्यक्तिलाई केवल पढ्नको लागि मात्र होइन तर तपाईंको व्यवसायको बारेमा के हेर्नको लागि मद्दत गर्नुहोस्। जब मेरो व्यापार खाता सिर्जना गर्दै, तपाईं एक लोगो र एक कभर फोटो थप्नुहुनेछ। यो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डलन, वा पिनरेस्ट खाता सेट अप गर्ने जस्तो छ। यी छविहरू बिना, यो तपाईंको ब्रांडलाई अनलाइन चिन्नको लागि कठिन हुनेछ।
समाचार, अपडेट र विशेष अफरहरू पोस्ट गर्नुहोस्: गुगलको मेरो व्यापार खाता तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम छ। जे होस्, यसको कुनै उपयोग छैन यदि यसको सामग्री छैन भने। व्यवसायहरूले यी खाताहरू खोल्छन् आगन्तुकहरूलाई पढ्नको लागि जानकारी प्रदान गर्न। तपाईंको व्यवसाय खातालाई जानकारी चाहिन्छ जस्तै तपाईंको ठेगाना, घण्टा, र सम्पर्क जानकारी, जसलाई अपडेट राख्नु आवश्यक छ। यहाँ जानकारी बदल्न निश्चित गर्नुहोस् यदि यो तपाईंको व्यवसायमा कहिले परिवर्तन हुन्छ।
यी केही उत्तम तरिकाहरू हुन् जुन केवल तपाईंको वेबसाइट मात्र बनाउँदैन तर खोजीहरूमा तपाईं मेरो व्यवसाय प्रोफाइल पनि हुनुहुन्छ।